Haddii aad ku qorantahay Xafiiska Shaqada oo aad baahi weyn u qabto in lagaa taageero si aad suuqa shaqada u gasho, goobo tababar oo shaqo ku dhafan-tahay ayaa kaa caawin kara in aad isu diyaariso shaqo.
Haddii aad muddo dheer ka maqnayd suuqa shaqada oo aanad hubin awooddaada shaqo, waxaad taageero ku heli kartaa dadaallo shaqo u diyaarin ah. Waxaad fursad u helaysaa in aad nolosha shaqada ku gasho jawi shaqo oo degan, aaminna ah oo ku aaddan shirkad arrimaha bulshada la xiriirta. Inta wakhtigaas lagu jiro waxaad heli doontaa hagitaan dhow iyo taageero si aad u horumariso kartidaada aad ku buuxin karto shuruudaha aasaasiga ah ee nolosha shaqada, aadna u hesho waddo aad ku gaari karto in aad is-masruufto. Ujeeddadu waa in aad shaqo ka hesho shirkadda arrimaha bulshada la xiriirta. Taas beddelkeeda, u diyaargarow waxbarasho ama in aad ka qaybqaadan karto mid ka mid ah barnaamijyada kale ee Xafiiska Shaqada.
Taageerada waxaa loogu tala galay adigaaga muddo dheer ka maqnaa suuqa shaqada oo aan hubin awooddaada shaqo iyo nooca shaqada ee kugu habboon.
Sidan ayey wax u shaqeeyaan
Marka hore waxaan gaareynaa go’aan ku aaddan in aad u baahan tahay dadaal shaqo u diyaarin.
Markaas ka dib waxaad dooraneysaa qandaraasle. Waxaan ku siineynaa macluumaad ku aaddan qandaraaslayaasha aad dooran kartid.
Marka aad qandaraasle doorato waxaan marka hore ku bilaabeynaa wadahadal dhex mara adiga, qandaraaslaha iyo xafiiska shaqada.
Waqtiga waxyaabaha laguu dirayo, waxaannu waafajineynaa duruufahaaga.
Inta uu dadaalku socdo waxaan lahaaneynaa xiriir joogto ah oo aan kula soconeyno horumarkaaga, kuna eegeyno sida aad u aragto in ay u socdaan hawlaha goobta shaqadu.